तिहारको मुखमा ३ घरका एक्ला छोराहरुको मृत्यु, सोकमा डुब्यो परिवार – Chautari Online
November 12, 2020 387
२ दिन अघि तुलसीपुर दाङमा ट्रकले ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । राप्ती गाउँपालिका वडा नं ४ मौरीघाटमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ३३४४ नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आइरहेको रा ५ प ६७४४ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार तीन जनाको घटनास्थलमै मृुत्यु भएको हो ।
मंगलबार राति ८ बजेतिर उक्त दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताउनुभयो । मृुतक तीन जना मनोज गाहा मगर, कसम पुन मगर र क्रोनिज जि मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शव परीक्षणका लागि लमही अस्पतालमा राखिएको छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग आफन्तले ठप्प पारेका छन् ।
पूर्ववाट पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ४ मौरीघाटमा बेलुका पौने ८ बजेतिर ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि ट्रक पनि सडकमै पल्टिएको छ। तीव्र गतिका कारण उक्त दुर्घटना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। मृतक तीनै जना युवाको शव पोष्टमार्टमका लागि लमही अस्पतालमा राखिएको छ। हेर्नुहोस् भिडियो
Prevकोरोनाको लक्षण भए सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार
Nextकुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि !